CDC na-enye Guam kasị njọ njem ogo
Home » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Guam » CDC na-enye Guam kasị njọ njem ogo
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Guam • Akụkọ Ahụike • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Iwughachi • Safety • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Guam Gọvanọ na CDC kacha njọ ogo njem
Goga site na njegharị ihe ize ndụ njem nke oke rue elu n'ihi COVID-19 naanị n'ime otu ọnwa, forlọ Ọrụ Maka Nchịkwa na Mgbochi Ọrịa (CDC) agbanweela ọkwa njem maka Guam dị oke - ọkwa kachasị njọ.
Guam ka nwere ebe ọwụwa anyanwụ maka njem njem ụbọchị abụọ gara aga iji mepee njem.
Gọvanọ Guam ka kwuputara nnọkọ mmekọrịta maka ihe ruru mmadụ 100 ka enyere.
Achọpụtala ụyọkọ COVID-19 na nso nso a, na-ebuli ọnụ ọgụgụ ikpe ma na-eme ka CDC nye Guam ọnọdụ njem kachasị njọ.
Naanị ụbọchị 2 gara aga na Mee 15, Guam emeela ka mmachibido iwu ọpụpụ iji megharịa njem. A "dị elu" ma ọ bụ ọkwa 4 si na CDC pụtara "ndị njem kwesịrị izere njem niile na Guam."
Guam nwere ikpe 100 ọhụrụ COVID-19 n'ime ụbọchị 28 gara aga ma dekọọ ọnwụ 3 COVID-19 na ụbọchị 3 na nso nso a. 3 ahụ nwụrụ anwụ enweghị ọgwụ mgbochi.
Guam Gọvanọ Lou Leon Guerrero na Tuesday kwuru nke a gbanwee mgbanwe njem njem Guam “Ekwesịghị ile anya dị ka ịlaghachi azụ” na mgbake agwaetiti ahụ na maka njem nleta mana ihe ncheta na o ghaghi idobe ihe mgbochi mgbochi COVID-19.
Gọvanọ ahụ hapụrụ ịhapụ ndị gọọmentị na-eme njem maka njem njem zuru oke na ndị si na efu gaa n'okwu ole na ole COVID-19, yana ịhapụ nnọkọ mmekọrịta maka mmadụ 100 n'ihi ọganihu na-adịbeghị anya na mbọ Guam.
Mana CDC wedatara ogo Guam ala ọzọ, naanị izu abụọ ka ọ gbanwechara ya si "agafeghị oke" gaa na "elu." Ngbanwe mbu bu ihe nchikota nke achoputara. “Anyị maara nke ọma etu otu ezigbo okwu ga-esi baa ụba ma nwee mmetụta dị njọ na ezinụlọ, ụlọ akwụkwọ, na azụmaahịa. Biko mee akụkụ gị iji chebe ibe gị, ma chebe Guam, "ka o kwuru.